Maalinta loo asteeyay xanuunka dilaaga ah ee HIV Aids oo dunida laga xusay. – Kismaayo24 News Agency
by admin 1st December 2019 069
Puntland, 56 qof ayaa siddeeddii bilood ee ugu danbaysay laga heley cudurka Aids-ka sida ay sheegtay hay’adda lada-gaalanka Aids-ka Puntland ee PAC.
Hay’addu waxay kaloo sheegtay in 486 qof ay hadda qaataan dawada guud ahaan gobollada Puntland,haseyeeshee cudurku 1% ayuu ka yar yahay guud ahaan dalka sida ay hay’addu sheegtay.
Meeqa Lacag ayaa laga rabaa Dhalinyaradii Kufsiga geesatay? Gabdhaha la kufsaday Xuquuqdooda Maxay tahay? Akhriso Warqad dhameystiran
Tifaftiraha K24 29th January 2017
Dhagayso:- Ciidamadda Amaanka Gobalka Hiraan oo soo qabtay 22 qof oo Al- shabaab ah